PressReader - Ilanga: 2017-08-31 - Kusolwa ukuthi uloyiwe ominzile
Kusolwa ukuthi uloyiwe ominzile
Kuthiwa ubewuhlupho emphakathini
Ilanga - 2017-08-31 - Izindaba - PHUMLANI GAMA editor@ilanganews.co.za
SISHAQISE amalunga omphakathi isigameko sokuminza komfundi obesolwa ngokuba wuhlupho waseMachakwini High School eMtubatuba, ogwini olusenyakatho yeKwaZuluNatal ngoLwesibili obethenjiswe u-R40 ngokukhipha isipakupaku samanzi ebesimuka nomfula.
Kusolwa ukuloya ekushoneni kukaSboniso Sibiya (17) okuthiwa udlule emhlabeni esexolisile ku- bantu abahlukumezile - uminze emfuleni iNyalazi. Kuthiwa uminza nje ubethenjiswe le mali ngumngani wakhe abebeyokha naye amanzi.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, umufi ubewuhlupho kozakwabo esikoleni ngisho nakothisha. Kuthiwa ngesonto eledlule uxabane nothisha wesifazane wamthuka nokumthuka. NgoLwesibili ubuyele esikoleni eyofunda, okuthe sekuthandazelwa ukubuyela emakhaya, wacela ithuba lokukhuluma phambi kothisha nabafundi.
Kuthiwa ufike phambili wathi kakukho okuningi azokusho ngaphandle kokuthi uxolisa kubona bonke othisha nabafundi ngokubahlukumeza ebathuka. Kubikwa ukuthi usho la mazwi maqede wakhihla esikaNandi.
“Uma simbuza ukuthi ukhalelani, akaphendulanga, ubelokhu eqhubeka ekhala nje ethi naye akazi kwenzekani uzwa eshiywa yigazi,” kusho omunye umfundi ocele ukuba angadalulwa ngoba naye wesaba ukuthi angase aphanjaniswe nemvula.
ILANGA lixhumane no- Mnu Zakhele Nyawo ongusihlalo wesigungu esilawula isikole - obuye abe yikhansela kuwadi 11 kuMasipala waseMtubatuba uthe:
“Nami ngethuke kwaphela nasozwanini sengithola imibiko yokuthi sekuminze omunye wabafundi esikoleni engisiphethe. Ngokuthola kwethu, umfundi ubefuna ukunikwa u-R40 abewuthenjiswe ngomunye wabangani bakhe. Lo mngani wakhe uthe uma ezama ukukha amanzi isigubhu sakhe saphunyuka.
“Ucele noma ngubani ukuba amkhiphele sona uzombonga ngoR20. Ubuye wathi uzobonga ngoR40. Umufi ukhumule izimpahla wakhala phakathi kanti ngeke esakwazi ukuhlamba abuye nesigubhu. Bazamile abebenaye emfuleni kodwa kwangalunga.
“Amaphoyisa nabatshuzi bafikile kodwa bakhala ngokuthi sekumnyama. Isidumbu sikamufi sikhishwe izolo ekuseni ngoLwesithathu. Namanje basahlukumezekile ontanga yakhe abambone egwiliza ezama ukuhlamba kwasho ukuthi iNyalazi wumfula okhulu futhi ohambayo,” kusho uMnu Nyawo.
Elinye ilunga lomndeni wakwaSibiya - elingathandanga ukudalulwa - liveze ukuthi umufi yingane yomfowabo ebingahloniphi, okungenzeka ukuthi iphanjaniselwe ngabantu.
“Lo mfana ubengakhuzeki, engamazi omunye umuntu. NgeSonto ubejikijelana ngamazwi nothisha esikoleni, emphakathini ubenesandla esilula eshaya amantombazanyana alingana naye nabafana abancane kuyisona leso. Sibuhlungu ngokushona kwendodana yethu kodwa nje...,” kusho yena.
Ikhansela laku-wadi 10 lapho kwenzeke khona lesi sigameko, uMnu Robert Bukhosini, lithe konke lokhu kudalwa wukungabikhona kwamanzi kule ndawo.
“Sizwelana nomndeni owehlelwe yilesi sigameko. Ukuba akhona amanzi kule ndawo ngabe akashonanga lo mfana. Nokho-ke indlela okuchazwa ngayo, kukhomba ukuthi besekufike isikhathi sakhe sokuhamba emhlabeni ngoba nakhu ubecela uxolo.
“Sisazohlangana nomndeni kamufi ukuze sibone ukuthi siwulekelela kanjani maqondana nezinhlelo zokubekwa kwethambo lakwaSibiya,” kusho uMnu Bukhosini.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uKpt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe idokodo esiteshini samaphoyisa saseMtubatuba mayelana nokushona komuntu emfuleni.